विशेष उदयपुरमा पूर्व शहरी विकास मन्त्री कि पूर्व शहरी विकास राज्य मन्त्री ?
Ujyaalo सोमवार, मंसिर १८, २०७४ १९:०९:००
सुमित्रा कोईराला/उज्यालो ।
उदयपुर, मंसिर १८ – उदयपुर क्षेत्र नंं. १ मा एउटै मन्त्रालय सम्हालेका दुई मन्त्री चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएका छन् । उदयपुर क्षेत्र नं. १ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र नेकपा एमालेकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शहरी राज्यमन्त्री मञ्जु चौधरी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
वाम गठबन्धनको पक्षवाट चौधरी नागरिकको घरदैलौ पुग्नुभएको छ भने, खड्का काँग्रेसका तर्फवाट चुनावी दौरानमा हुनुहुन्छ । स्थानीय तह चुनावको मतलाई आधार मानेर विष्लेषण गर्दा वाम गठबन्धन भारी मतले अगाडि देखिन्छ ।
तीनवटा नगरपालिकमा मिलेर बनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १ मा चौदण्डीगढी नगरपालिमा मात्र कांग्रेसले जितेको छ । त्रियुगा र वेलका नगरपालिका नेकपा एमालेको जितेको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा उदयपुरबाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित मञ्जु चौधरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो । मन्त्री भएपछि चौधरीले त्रियुगा नगरपालिकालाई नमूना शहरको रुपमा विकास गर्न जोड दिएको बताउनुहुन्छ । १ नम्बर प्रदेशमै नभएको मदन भण्डारी सभाहल ३५ करोड बजेटमा उदयपुरमा बन्दैछ । दुईवटा हल अतिथि गृह बन्ने कार्य चौधरीकै योजना हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो कार्यकालमा धेरै ठाउँमा योजना पुगेको छ, पहिचान सहितको शहरको रुपमा त्रियुगा नगरपालिकालाई चिनाईंदैछ । म नपुगेको कुनै गाउँ टोल छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार सहित अहिले आँखा अस्पतालका लागि पनि ४० लाख्र रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको छ । हरेक क्षेत्रमा मैले जोड दिएको छु । त्यसैले कांग्रेसले जस्तोसुकै उम्मेदवार दिएपनि म सजिलैसँग जित्न सक्छु । १८ अर्बको चतरा गाईघाट सडक विस्तार योजना मेरै पहलमा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो । त्यहाँ चार लेनको बाटो बन्दैछ । ४२ वटा पुल बन्दैछन् । जिल्लामा ठूल्ठूला बसपार्क बन्दैछन् । आँखा अस्पताल, सामुदायिक भवनहरु बन्दैछन् । उदयपुरका शहरलाई नमुना शहरको रुपमा विकास गर्न विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।’
कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले पनि विकासका एजेण्डासहित मतदाताको घर दैलो पुगेर भोट मागिरहनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मध्य र पूर्वी उदयपुरको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको त्रियुगा नदी नियन्त्रणको लागि ७ अर्ब बराबरको योजना निर्माण गरेको छु । त्रियुगा नदीले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको क्षेत्र, जोगीदह, हडिया, सुन्दरपुर, तपेश्वरीसम्मका क्षेत्रहरुमा बर्षेनी क्षति पुर्याउदै आएकाले मैले विशेष प्राथामितामा लिएको छु । द्वारा खोलाको पुल मैले नै शिलान्यास गरेको त्यो पूरा भइसक्यो । मैले पूर्व उदयपुरका क्षेत्रमा धेरै पुलपुलेसा निर्माण गरेको छु ।
बजेट भाषणका पुस्तकहरुमा मैले लेखेर दिएका धेरै योजना परेका छन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र डेढ अर्बका खानेपानी योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन । त्रियुगा नगरपालिकाकै असारी, जलजले, मोतिगडा लगायतका क्षेत्रमा खानेपानी योजना छन । विकट पहाडी वस्तीमा बिजुली बाल्देको छु । जोगिदहमा विशाल विद्यालय भवन निर्माण गरिदिएको छु । बेल्टार, जोगिदह, हडिया, बसाहा रामपुर क्षेत्रमा धेरै विद्यालयका भवन मैले निर्माण गरेको हुँ । मैले गरेका अशंख्या कामहरु छन ।
एक महिना अगाडि मात्र मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ल्याएर रानीटार धाप्लाङमा दुधकोसीमा पक्की पुलको शिलान्यास गराएको छ । उदयपुरमा एयरपोर्टको काम अगाडि बढाई रहेको छु ।’ दुवै उम्मेदवारका आआफ्नै दाबी छन् । यसपाली मतदाताले कसलाई पत्याउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।